Global Voices teny Malagasy · 19 Jolay 2017
19 Jolay 2017
Tantara tamin'ny 19 Jolay 2017
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 19 Jolay 2017
Marobe ireo manana diplaoma momba ny asa fanaovan-gazety izay miady mafy mba hahita asa ao amin'ny haino aman-jery, indrindra amin'ny fahitalavitra. Fotoana izao hialàna amin'ny tsy fahampian'ny olona ary mampiditra olona vaovao manana hevitra marobe sy fiofanana tsara.
Maldiva: Teknika Fampijaliana Any am-Paradisa
Azia Atsimo 19 Jolay 2017
[...] Raha mifidy toerana iray fialantsasatra TSY hita ao anatin'ity lisitra ity ianareo dia ho afaka hisitraka sy hankafy tanteraka ny fialantsasatrareo – tsy misy iasàna saina.[...]
Nandalovan'ny tafio-drivotra mafy ny fanjakana Breziliana maro. Olona miisa fito no maty tany amin'ny fanjakana Santa Catarina sy Rio Grande do Sul, atsimon'i Brezila, raha efatra kosa no maty tao amin'ireo tranobongo tao Sao Paulo. Nalaina tamin'ny faritra samihafa tao amin'ny firenena ny sary eto ambany.
Bilaogy Ampiasàna Lahatsary & Kambodza
Kambodza 19 Jolay 2017
[...] Lafo ny fifandraisana an-telefaona ary raha manam-bintana ry zareo dia afaka mifanakalo imailaka. Fa ny bilaogy ampiasàna lahatsary no toy ny fifankahitàna tava kokoa ary fomba iray goavana hifandraisana indray amin'ny kolontsainao [...]